प्रकृतिसँग बालबालिकालाई पनि घुलमिल गराउने हो कि? « Salleri Khabar
प्रकृतिसँग बालबालिकालाई पनि घुलमिल गराउने हो कि?
प्रकाशित मिति : 19 November, 2019
बाल्यावस्था त्यो समय हो, जहाँ बाल-बालिकाको स्वभाव, मनपर्ने-नपर्ने कुराहरु छुट्याउन सक्ने राम्रो बानी बसाल्न सकिन्छ । उनीहरुलाई बोलेर भन्नुभन्दा उनीहरुमा स-साना अभ्यासबाट प्रकृतिमैत्री बनाउनपर्छ ।
यी सबै कुराहरुको रमाइलो पक्ष भनेको तपाईंले आफ्ना बालबालिकालाई राम्रो कुरा सिकाएर पैसा बचत गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
सामानहरुलाई व्यवस्थित राख्न सिकाउनुपर्छ
बालबालिकाहरुलाई प्रकृतिमैत्री बनाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको सामानहरुको कदर गर्न सिकाउनुपर्छ । उनीहरुलाई जहाँ गए पनि आफ्नो घर जस्तै सोच्नुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ ।
धारा खुल्ला राख्नुहुँदैन:आफ्ना बाल-बालिकाहरुलाई नुहाउँदा, ब्रस गर्दा र सरसफाई गर्दा पानी खेर जाने कुराप्रति सचेत गराई पानीको हरेक थोपाको महत्व बुझाउनुपर्छ ।
ष्टिकको प्रयोग गर्नुहुँदैन:भान्छामा प्लास्टिकको डस्टबिनभन्दा काँचको डस्टबिनको प्रयोग गर्नुपर्छ । प्लास्टिक ब्यागलाई प्रयोग गर्नुहुँदैन । कपडाको झोलाले बच्चालाई सजाउन सिकाउनुपर्छ ।
अर्ग्यानिक सामानहरुप्रति सजग गराउनुपर्छ:यदि तपाईंको घर बाहिर ठाउँ छ भने त्यहाँ स-साना किचन-गार्डेन बनाउन सक्नुहुन्छ । त्यहाँ आफ्नो घरको लागि आवश्यक सागपात रोप्न सक्नुहुन्छ । यस्तो कामको लागि बालबालिकाको सहयोग लिनुपर्छ ।
बालबालिकालाई प्रकृतिका नजिक ल्याउनुपर्छ:बालबालिका प्रकृतिको नजिक त्यसबेला हुन्छन्, जब उनीहरुले त्यसको सुन्दरतालाई महसुस गर्छन् । त्यसका लागि उनीहरुलाई साँझ अथवा बिदाको दिन पार्क घुम्न लिएर जानुपर्छ । जब उनीहरु प्रकृतिसँग घुलमिल हुन्छन् स्वाभाविक रुपले उनीहरु यसप्रति आकषिर्त हुन्छन् ।
पुरानो सामानको कलात्मक प्रयोग गर्न सिकाउनुपर्छ:पुरानो ब्याग, कपडा, पत्रिका, डब्बा आदिलाई प्रयोगमा ल्याउने काम सुरुआती ट्रेनिङ बालबालिकालाई घरबाट नै प्राप्त भयो भनेपछि गएर उनीहरुले घरमा काम नलाग्ने पुराना सामानहरुलाई पुनः काममा ल्याउन सक्छन् ।
दीर्घरोगी सहित आईसीयूमा भर्ना भएका बिरामीको पनि कोरोना परीक्षण गरिने
२३ वर्ष बितिसक्दा पनि बनेन स्वास्थ्य चौकीको भवन, वडा अध्यक्ष भन्छन् ‘भवन पर्यो भन्दाभन्दै परेन’
२३ वर्ष बितिसक्दा पनि बनेन स्वास्थ्य चौकीको भवन, वडा अध्यक्ष भन्छन् 'भवन पर्यो भन्दाभन्दै परेन'
यी राम्रा बानी जसले तपाईलाई सफलताको बाटोमा पुर्‍याउँछ !
यस्ता राम्रा बानी जसले तपाईलाई सफलताको बाटोमा लैजान मदत गर्छ
कोभिड १९ सङ्क्रमण भएका महिलाले स्तनपान गराउन सक्ने